ikhaya » iindaba » I-Densitron yenza i-8 entsha "I-TFT Display ifanelekile ekusasazeni
I-Densitron yenza i-8 entsha "I-TFT Display ifanelekile ekusasazeni
Isisombululo esiphezulu kunye nokucaca kunye nekhetho lokuthinta isikrini
(Septemba 07, 2017). Densitron, (IHolo 10, Yima i-D42) umkhokeli wehlabathi jikelele ekuboniseni, ukubeka esweni kunye nesisombululo sekhompyutheni esishumekileyo, siya kubonakalisa isibonakaliso sokuqala senziwe ngokukodwa kwimarike yokusasazwa. I-8 "I-2U IPS TFT bonisa, ekhoyo kwakhona njengokhetho lwekrini elixhasayo (PCT), olukhethiweyo, olujongene ne-1600 x 480 isisombululo kule fomu yefomu. Ubungakanani bayo buyenza ibe yinto enhle kuyo nayiphi na i-2U ephakamileyo.
"Iingxoxo zethu kunye nabathengi basasazo kunye nabanye kwi-shishini baye baqokomisa imfuno yolu bunzima beemodyuli eziza kufakwa kwisiboniso esisikiweyo. Siye saqaphela ukuba ukhetho olusakhulayo lwekhono lobugcisa bekrini, "Utshilo uLuo Luo, umphathi wezeMveliso wehlabathi we-Densitron we-TFTs.
"Ngenxa yoko, siye sasebenzisa ubuchule bethu bexesha elide ukuze senzeke ngokufanelekileyo kwiinkampani zokusasaza. Kwakhona, ukhumbule ukuba abavakalisi abanalo ibhajethi ukutshintsha iteknoloji yabo, siye senza umboniso wokuphila ixesha elide. "
entsha 8 " iimpawu zeglasi ze-IPS ukuqinisekisa ukufunwa kweemfuno zoyilo olusekelwe phantsi. Kukho iinketho zokwenza ngokwezifiso ezifana ne-bespoke lens, umda omnyama, ukuguqulwa kwe-FPC / ukubuyiswa komva kunye / okanye ukukhonkxa kwe-optical, ukuhlangabezana nokuyila kunye nokusingqongileyo
"I-Densitron igxile ekujonganeni nemingeni kunye nalo mboniso omtsha siye sigxininisa ekuqwalaseleni iimfuno zomsasazo, "Kusho uLuo Luo. "Sibheke phambili ekuboniseni ukuma kwe-IBC size sixoxe ngezinye iindlela ezikhethwa ngabanye abasuka kumashishini."
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Injini yeVidiyo	2017-09-08
Previous: Musa Ukushiywa Ngaphandle Kwebusika: Ukubaluleka Kwemigangatho Yolwazi
next: I-Nevion ivula inguqu yakutsha ye-VideoPath software
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Densitron yenza i-8 entsha" I-TFT Display efanelekileyo yokuSasazwa ". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/densitron-makes-new-8-tft-display-fit-for-broadcast/. Enkosi.